Travel Agency Premnitz Rathenow ☀️ Brandenburg ✅ nanomboka tamin'ny 1998
Hitsambikina amin'ny atiny
Camper - Fikarohana môtô
Fialan-tsasatra any Alemana - fanjakana federaly
AIDA dia manolotra
AIDA Minitra farany
Mametraha sidina voatondro
Mamaky sidina charter
Lalao Olaimpika ara-panatanjahantena 2020-2021
Tatitra momba ny dia
Bus fitsangatsanganana-mpandeha fitety bus
Renirano renirano Rhine Main Moselle
Sarintany momba ny raharaha coronavirus any Alemaina
Sarintany momba ny coronavirus manerantany
Fiantohana fitsangatsanganana an-tserasera
Fiara eo amin'ny seranam-piaramanidina
Mamandrika fiara manofa fiara
Tongasoa eto Premnitz sy Rathenow!
Tolotra mafana +49 3386/210 110
Noho ny Krizy Corona nametraka hotina manokana ho anao izahay izay hamaliana fanontaniana momba ny fanatanterahana sy fanafoanana ny dia.
Omeo antso izahay na soraty aminay amin'ny alàlan'ny whatsapp.
vaovao farany momba ny dia
rebooking sy fanafoanana maimaim-poana 3. Desambra 2020
Dubai dia manangana hotely avo indrindra manerantany 16. Novambra 2020
Nosy Canary - fanandramana corona ratsy dia ilaina amin'ny fidirana 2. Novambra 2020
Nanainga ny fampitandremana momba ny dia ho an'ny Nosy Canary ny birao federaly 26. Oktobra 2020
Ny morontsiraka tsara tarehy indrindra eto an-tany 2020 28. September 2020
Ireo firenena tsy misy fampandrenesana momba ny dia 18. September 2020
Fampitandremana momba ny dia ho an'ny firenena 38 hafa dia tokony hatsahatra 17. September 2020
Ireo no lalam-by malaza indrindra any Alemana. 7. September 2020
Ny fialan-tsasatra amin'ny fahazoana volamena any Bulgaria dia afaka miverina indray 25. Aogositra 2020
Danemark fialan-tsasatra - Azo atao indray ny mandeha any Danemark raha tsy misy fijanonana farany ambany 19. Aogositra 2020
Ny masoivohon'ny fitsangatsanganana ao Premnitz - Rathenow sy Brandenburg rehetra
Efa nanomboka tamin'ny 1998 io Premnitz fitsangatsanganana ary izany Ny serivisy fitsangatsanganana Rathenow. Amin'ny maha masoivohon'ny fizahantany anao eo akaiky eo, dia hanome toro-hevitra anao izahay momba ny filanao fitsangatsanganana rehetra ary hanolotra serivisy tsy manam-paharoa, fahaiza-manao amin'ny toro-hevitra, fahalalana betsaka momba ireo faritra fialantsasatra maro karazana ary ny fitiavantsika be dia be! Ireo mpanjifanay dia tsy vitan'ny Rathenow sy Premnitz fotsiny fa avy amin'ny Brandenburg ary i Havelland iray manontolo.
Faly izahay manome hevitra anao amin'ny alàlan'ny mailaka, amin'ny alàlan'ny mailaka na, tsara kokoa, manokana any amin'ireo biraonay roa any Rathenow ao amin'ny City Center sy ao Premnitz ao Bergstrasse 46 (State of Brandenburg).
Amin'ny maha serivisy manokana dia azonao atao ny mandamina fotoana voatondro ho an'ny mpanjifa! Noho izany dia afaka mipetraka sy miala sasatra ianao ary mahazo toro-hevitra tsy misy fanerena fotoana. Alefaso anay ny mailaka amin'ny fotoana voatondro tianao mail@reisecafe-premnitz.de na antsoy izahay amin'ny 03386 210110.
Ho hitanao ny fizarana maro samihafa momba ny dia ao amin'ny tranokalanay. Raha manana fanontaniana ianao, dia ho faly hanampy anao izahay. Aza misalasala mifandray aminay.
ambany Fitsangatsanganana fonosana Afaka mahita milina famandrihana samihafa ianao izay azonao ampiasaina mba hisehoana tolotra afaka maneho faritra, ohatra. Under tafiditra avokoa ny tolotra momba ny dia dia aseho. Ny sokajy minitra farany manome anao lisitry ny laharana fitsangatsanganana izay misy ankehitriny. Raha mampiasa ny sivana isan-karazany ianao, dia afaka mandeha fitsangatsanganana iray manontolo na amin'ny Internet ihany Mametraha hotely. Amin'ny hevitra farany Fialan-tsasatra any Alemana hahita filazalazana fohy momba ireo fanjakana federaly 16 ianao izay misy rohy mankany amin'ireo toerana fijerena sy toeram-pialan-tsasatra ho an'ny fanjakana tsirairay.
Maninona ianao no tsy manao ny iray Cruise! Safidio ny samihafa Aida dia manolotra na hahazoana ny farany Aida minitra farany Jereo ny fitsangantsanganana. The Aida Cruises dia miasa amin'ny karazany maro Routes maneran-tany. Miaraka amin'ny Aida Vario tariffs mijanona amin'ny anao Dia andiany tsy misy tiana.
Ianao dia mpanidina matetika ary aleoko mandinika tsirairay ny dianao. izahay boky ny Sidina voalahatra na Sidina fiaramanidina ho azy. Azonao ampiasaina tsara ny checkin an-tserasera tanteraho izay tsy miandry fotoana ela sidina afaka mifaninana.
Ny mampiavaka manokana ny masoivoho fizahan-tany Premnitz sy ny masoivoho fitetezana Rathenow (Land Brandenburg) dia fitsangatsanganana ara-panatanjahantena. Raha manana Travel mankany amin'ny Lalao Olaimpika any Japon Tokyo 2021 ny fandaharam-potoana misy ny tapakilan'ny fifaninanana tsirairay, dia mifandray aminay tsara ianao. Ho an'ny UEFA Championship Football Football 2021 afaka manome anao fonosana mitambatra miaraka amin'ny sidina izahay, Hotel ary manolotra tapakila ho an'ny lalao tsirairay.
Rohy Premnitz Rathenow Brandenburg
Fialan-tsasatra any Alemana
Fikambanana fizahan-tany alemana
Teny manan-danja avy amin'ny sehatry ny fizahantany
✅ Inona no dikan'izany rehetra izany?
Ny tafiditra ao dia tsy ny sakafo ihany fa ny zava-pisotro misy alikaola ary tsy misy alikaola.
✅ Inona no faran'ny minitra farany?
Vakio ny telo minitra ka hatramin'ny roa herinandro manomboka ny dia. Mandritra io vanim-potoana io, ny mety hametraka toerana sisa tavela na toerana nofoanana.
✅ Inona no fitsangatsanganana fonosana?
Raha ny sidina sy ny hotely dia efa tafiditra amin'ny vidin'ny fizahan-tany ary karakarain'ny mpandraharaha ny fizahantany dia antsoina hoe fizahan-tany fonosana izy io. Ny serivisy fanampiny amin'ny fitsidihana fonosana ihany koa dia ny famindrana any amin'ny hotely na ny sakafo rehetra tafiditra ao.
✅ Orinasa misahana ny fitsangatsanganana Premnitz - ora fisokafan'ny Rathenow?
Alatsinainy - zoma manomboka amin'ny 9.00 ora ka hatramin'ny 18.00 hariva asabotsy manomboka amin'ny 9.00 ora ka hatramin'ny 12.00 hariva Mihidy ny alahady.
Ny serivisy fitsangatsanganana Rathenow
Centre City, 14712 Rathenow
Tafiditra ao daholo
Fivoriana fitaterana Facebook
Kafe ny fandehanana amin'ny Instagram
Kafe ny Youtube
Powered by WordPress | Theme: Sydney avy amin'i aThemes.